Waa Waqtigii La Beddeli lahaa Istaraatijiyadaha Suuqgeynta Emailka markii ... | Martech Zone
Emailadaadu waxay u egyihiin sidan:
Waxaa laga yaabaa in maado mawduuc ah oo soo jiidasho leh oo shakhsi ahaaneed halkii laga beddeli lahaa "ChangeThis: Issue 46"
Waxaa laga yaabaa in qadka qaar uu jabo si aanan ugu duubmin sida aan u aqriyay (ma aanan aqrin, macquul ma aheyn).
Waxaa laga yaabaa in emayllo badan oo MIME ah ay u diraan qoraal kuwa doonaya muuqaal caadi ah, laakiin HTML kuwa innaga mid ah oo ku raaxaysanaya emayl si fiican loo qaabeeyey.
Laga yaabee horudhac qasab ah?
Waxaa laga yaabaa in xoogaa meel bannaan oo u dhexeeya mawduucyada ay u sahlanaato iskaanka?
Waxaa laga yaabaa cinwaannada si loo muujiyo mowduucyada kala duwan oo looga sooco sharraxaadda?
Laga yaabee liistada liistada leh xiriiryada iyo macluumaadka la xiriira mid kasta?
Laga yaabee liistada xiriiriyeyaasha guud ee ku noqda websaydhka?
Waxaa laga yaabaa inay ka duwan tahay Adeeg Bixiye Email haddii taadu ay adagtahay in la isticmaalo?
Qaybta cabsida leh halkan waa taas BeddelTani'khadadka waa:
ChangeTani waxay abuureysaa nooc cusub oo warbaahin ah. Nooc warbaahin ah oo adeegsada aaladaha jira (sida PDF-yada, baloogyada iyo shabakadda) si looga hortago habka fikradaha loo abuuro loona faafiyo.
Waa urur weyn oo leh qaddar ballaadhan oo lagu dhiirrigelinayo isbeddelka hoggaamiyeyaasha iyo ganacsatada. Waa wax aad u xun oo ay doorteen inay iska indhatiraan habka isgaarsiinta keli ah ee iga ilaaliya inaan ku soo noqdo degelkooda.
Waxaan ka saarey.
5 / 8 / 2008: In kasta oo aan iska diiwaangeliyey, waxaan maanta helay emailkan. Ma hubo waxa dhici kara laakiin waxay ahayd horumar ballaaran:
Tags: liistada liiskabeddelashoxiriiriyeyaasha guudemailqaabeynta emaylkacinwaanadasal-dhigidaxariiq jabsanlinksMIMEmime qaybo badanwarsidahakhadka mawduucabooska cad
May 8, 2008 at 9: 17 AM
Waxaa laga yaabaa inaad madaxa ku garaacday. Qoraal wanaagsan iyo talo weyn.
May 8, 2008 at 10: 30 AM
May 9, 2008 at 10: 17 PM
Waxa aan ugu jeclahay waa marka macmiilku difaaco "Issue46" ee qadka uu ku xiran yahay oo ay lambar lambar kasta ku leeyihiin khadka maadada. Runtii waxaan maqlay mid dhahaya, "Waa sidaas si ay macaamiisheenu ugu abaabuli karaan emayl keydsan macaamiishooda emailka."
Miyaad igu kaftamaysaa Waxaad i siisaa lacag aad u tiro badan si aan kuugu sheego sida aad ugu fiicnaan laheyd furitaanka iyo guji-ilaa qiimaha laakiin aadan diyaar u aheyn inaad ka boodo qadka maadada? Nasiib wacan oo ku saabsan mitirradaas… ..